Ampitomboy ny laharam-pahamehan'ny vakansy fialan-tsasatra misy ny Blog Feature
PMS-es maro no manome motera fitantanana trano ho an'ny orinasam-pifandraisana mivantana ho an'ny orinasam-pitantanana fananana. Na dia amin'ny tranga mandroso indrindra aza, rehefa omena modely isan-karazany amin'ny endriny tadiavin'ny mpampiantrano iray dia voafetra tanteraka ny fiasan'ny motera famandrihana.
Amin'ny ankamaroan'ny tranga rehetra dia midika izany fa tsy azo atao ny manampy pejy manokana, na mampandeha bilaogy iray avy amin'ny Channel Manager na mpamatsy Engine Booking. Vokatr'izany dia voatery mahazo tranokala misaraka toy ny ny mpitantana ny fanofana fialan-tsasatra WordPress or Wix, mba hahafahanao mitoraka bilaogy. Ankoatry ny manahirana amin'ny fananana rafitra marobe, ny fametrahana sy fitazonana tranokala toy izany dia manampy amin'ny fahasahiranana ara-pitantanana, ary ny fampidirana fananana vaovao amin'ny rafitranao dia miafara amin'ny indroa araka ny tokony ho izy.
Ahoana no hanampian'ny bilaogin'i Zeevou?
Zeevou dia novokarina ho azy tranokala famandrihana mivantana manaova zavatra betsaka kokoa noho ny manome maotera famandrihana hahafahan'ny vahiny mamandrika. Raha ny marina dia manolotra vahaolana feno izahay hanampy anao hampiakatra ny laharanao amin'ny valin'ny motera fikarohana. Ity dia afaka manampy anao hitarika fifamoivoizana bebe kokoa amin'ny tranokalan'ny fandraisam-bahiny, ary hampiakarana ny tahan'ny fiovam-pon'ny vahiny mitsidika ny tranokalanao izay tena miroso amin'ny famandrihana.
Ankoatry ny fahafahanao manampy pejy manokana dia mamela anao hihazakazaka iray (na maro) bilaogy, avy amin'ny foiben-toeran-tsika rehetra. Amin'ny alàlan'ny fitorahana bilaogy momba ireo zavatra manintona eo an-toerana dia afaka manampy atiny tena sarobidy ao amin'ny tranonkalanao ianao. Ny atiny vaovao navoaka tamin'ny tranokala tsy tapaka dia iray amin'ireo antony manampy betsaka amin'ny Search Engine Optimization. Miaraka amin'ny fiasan'ny Zeevou's Blog, azonao atao ny mijanona tsy manahy momba ny lafiny teknika amin'ny fananganana sy fitazonana bilaogy, ary mifantoka fotsiny amin'ny famokarana atiny optimised SEO. Raha te-hivoaka an'io lafiny io koa ianao dia mifandraisa amin'ny Mpandrindra ny fahombiazan'ny mpiara-miasa rehefa vita sonia ary afaka manome anao teny nalaina ho an'ny fanoratana atiny sy sary izahay mba hampanan-karena ny bilaogin'ny tranonkalanao.